News Collection: सायद : रुचाइएका टपटेन डायलग
सायद : रुचाइएका टपटेन डायलग
अहिले मलका स्क्रिन, हल ट्रेलर, टेलिभिजन, रेडियोमा जतासुकै हेर्नु र सुन्नु भयो भने एउटा डायलग सुन्नुहुनेछ –नाइन एइट् फोर वान..बाँकी सबै आफै हान् । यो डायलग (संवाद) यति चर्चित बनेको छ कि कलेज, क्यान्टिन, रेष्टुराँ र सार्वजनिक थलोमा समेत तन्नेरीले मोबाइल संवादमा यो डायलग बोल्ने गरेका छन् । अभिनेता विल्सनविक्रम राई अन्तवार्ता दिन टिभी र रेडियो छिर्‍यो कि यो डायलग बोलिहाल्छन् । ‘बल हैन पासा, दिमाग लगा दिमाग’ लुटको यो डायलग यति चर्चित भयो कि त्योभन्दा उचाइमा ‘सायद’को यो संवाद चलेको छ ।
‘सायद’का टपटेन डायलग यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । पछिल्लो समय सिनेमामा यथार्थ जीवनको कुराकानीलाई संवादको स्वरुप दिने ट्रेन्ड विकास भएको छ । छोटो, मीठा, मर्मस्पर्शी, उखान र बोलिचालीमा प्रयोग गरिने भाषालाई सिनेमाले टिप्न थालेको छ । जस्तै ‘सायद’का यी डायलगले कलेज तन्नेरीको मनोविज्ञान र शैलीलाई गजबले प्रतिविम्वित गरेको छ ।
१) नाइन् एइट् फोर वान..बाँकी सबै आफै हान् ।
२) बाजा भाडामा नलिएर के सारङ्गी भाडामा लिने ?
३) यो बबाल चीज कसले बनायो होला, त्यसलाई हाम्रो कलेजमा लगेर सम्मान गर्नुपर्ने ।
४) जाबो इलेभेनमा पढ्नेलाई भाइ नभनेर, के दाई भन्नु ?
५) मलाई कोरियन फर्सी भन्यो भने, भोलिदेखि नेपाल बन्द् ।
६) कलेज प्रिन्सिपल र फाउन्डरको मात्र होइन, हामी स्टुडेन्टहरूको पनि हो ।
७) तेरो दाईलाई त उल्टो फर्काएर देखाइदिनुपर्ने ।
८) तेरो बूढी च्वाँख लाग्यो, त्यसलाई उठाउनलाई हो ।
९) गए हाम्रा गाँजा खाने दिनहरू ।
१०) सुड्डी अन्टीहरूसँग लभ गर्‍यो, टेन्सन पनि हुन्न ।